‘नेपालकै सामुदायिक वनहरु मध्ये उत्कष्ट भई पुरस्कृत हुंदैछौं, यो पथरीशनिश्चरेको शान हो’ - Pradesh Dainik
‘नेपालकै सामुदायिक वनहरु मध्ये उत्कष्ट भई पुरस्कृत हुंदैछौं, यो पथरीशनिश्चरेको शान हो’
काबुल बहादुर मगर (विकास)
हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पथरीशनिश्चरे–२
मोरङको पथरीशनिश्चरे–२ मा अवस्थित हरियाली सामुदायिक वन उपभोत्ता समूहका अध्यक्ष हुन् काबुल बहादुर मगर (विकास) । यस वन समूहको अध्यक्षमा वि.सं. २०७१ सालबाट प्रथम कार्यकाल निर्वाचित भएका मगरले दोस्रो कार्यकाल २०७४ भदौ १६ गते सर्वसम्मतिले अध्यक्षमा पुनः चयन भएका हुन् । उनको कार्यकालमा यस वनले ३ वटा पुरस्कार हात पारिसकेको छ ।
यस वनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा मोरङ दोस्रो, मोरङ जिल्लामा उत्कृष्ट वनको पुरस्कार र गत वर्ष गणेशमान सिंह सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गरिसेको छ । यसरी नै यस वर्ष नेपाल अधिराज्य भरिबाट करिब २३ हजार सामुदायिक वनहरु मध्येबाट उत्कृष्ट गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कार २०७४/७५ यही असार ३१ गते काठमाडौंको बबरमलमा नेपाल सरकारका संघीय माननीय वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको हातबाट १ लाख रुपैयाँको राशी सहित पुरस्कार र सम्मान–पत्र पाउँदै छन् । प्रस्तुत छ यही पुरस्कारको सन्दर्भलाई लिएर अध्यक्ष मगरसँग गरिएको संवादका मुख्य अंशहरू ः
गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कार २०७४/२०७५ पुरस्कार ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ ?
नेपालकै सामुदायिक वनहरु मध्ये उत्कष्ट भई पुरस्कृत हुंदैछौं, यो पथरीशनिश्चरेको शान हो । हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा पूर्णरुपमा कार्य गर्दै आइरहेको छु । त्यसमा मेरो सम्पूर्ण जिम्मेवारी अझ थपिएको छ । जुनसुकै काम गर्दा साँच्चै नै राम्रो प्रतिफल पाइदो रहेछ । उपभोत्ताले धेरै वर्ष वनलाई संरक्षण गरेको र टोली प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख, कार्यसमिति सम्पूर्णले राम्रो काम गरेका छन् । उहाँहरुलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै–धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । यहाँका सब–डिभिजन, सेक्टर वन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक महासंघ नगर लगायत जिल्ला सम्पूर्ण उपभोत्ताहरुबाट सहयोग पाएकाले वनका गतिविधिका कामहरु सहज ढंगले वनको काम गर्न पाएको हुनाले नै आज यो गणेशमान सिंह पुरस्कार प्राप्त गर्ने अवसर मिलेको हो । यसमा म ज्यादै खुशी भएको छु, राम्रो कामबाट प्रशंसा पाइदो रहेछ भन्ने कुरा पुष्टी भएको छ । त्यसैले, म ज्यादै नै खुशी छु ।
हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नै यत्रो ठूलो पुरस्कार पाउँछ भन्ने कहिले सोच्नुभएको थियो ?
मैले यत्रो ठूलो पुरस्कार पाउँछु भन्ने त लागेकै थिएन । तर, पनि हामीले प्राप्त गर्दैछौं । त्यसमा वनको कार्य गर्दा वन ऐन, विधान, कार्ययोजना, सब डिभिजन, डिभिजन वन कार्यालयको विधान, कार्ययोजना, सब डिभिजन, डिभिजन वन कार्यालयको निर्देशन अनुसार काम गरेका छौं । त्यसमा सुशासन, पारदर्शी कुरा, जुन कार्ययोजना विधानले उल्लेख भएअनुसार काम गरेकाले पुरस्कार पाउने सोच भएकाले पनि, यो पुरस्कार पाउन सम्भव भएको हो ।
असार ३१ गते पुरस्कार प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी खुशीयाली मनाउने योजनामा हुुनुहुन्छ ?
निश्चय पनि यो पुरस्कार प्राप्त गर्नु भनेको पथरीशनिश्चरेवासीको लागि खुशीको कुरा हो । त्यसैले यसलाई हर्षोल्लासका साथ मनाउने योजनामा छौं । यहाँका प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई निम्त्याएर भब्य कार्यक्रम गर्ने योजना छ । यसमा आम उपभोक्ता सहित स्थानीय सरकार पथरीशनिश्चरेवासी सहित नगरपालिका परिक्रमा गर्ने छौं । यसमा सबै वन समूहलाई जागरुक गराउने योजनामा छौं ।
भावी दिनमा वनलाई अझ राम्रो बनाउन के कस्तो सोच राख्नुभएको छ ?
यो पुरस्कारबाट हामीलाई अझ थप राम्रो काम गर्ने प्रेरणा मिलेको छ । त्यसमा पनि भावी दिनहरुमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार अब्राहमलिंकन पुरस्कारका दाबेदार बन्ने सोच राखेका छौं । यस वन समूहमा अझ राम्रो उर्जाशील काम गरेर अगाडि बढेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार थाप्न सकिनेछ भन्ने योजना समेत रहेको छ । हामीले राम्रो काम ग¥यो भने अन्तर्राष्ट्रिय अब्राहमलिंकन पुरस्कार पाउन पनि त्यति गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन ।
सबैभन्दा पहिला त, वनमा सुशासन, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त जस्ता कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा मिठो प्रतिफल पाइँदो रहेछ । यसमा वन समूहका सम्पूर्ण उपभोक्ताले मलाई सघाउन सहयोग गर्ने सब डिभिजन, डिभिजन वन कार्यालय सेक्टर वन कार्यालय, सामुदायिक वन महासंघ सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरुलाई मेरो तर्फबाट धेरै–धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छु । यो स्थानमा ल्याई पु¥याउने सम्पूर्ण सहयोगी प्रति सदैव आभारी छु । साथै पत्रकार साथीहरुलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
क्रेजी डटकमको सहयोगमा
बेतिनी सामुदायिक वनमा पूनः भीम बहादुर राई निर्वाचित कस्ले कति मत पाए ?
सामुदायिक वन विकासको आधार ः उपप्रमुख वास्तोला
देशभर चिसो बढ्यो, काठमाडौंको तापक्रम ९ दशमलब शुन्य डिग्री
वनपैदावार उपयोग नीति ल्याउन महासंघको माग